Ingqekembe yeVeki: Kusama (KSM) | Klever ezezimali
Njengo "mzala wasendle wePolkadot," uKusama liqonga lovavanyo lebhlokhi eyenzelwe ukubonelela abaphuhlisi ngesakhelo esinobunzima obukhulu kunye nesisebenzisanayo.
Yintoni iKusama (KSM)?
I-blockchain ye-Kusama yakhelwe phezu kwe-Substrate-iqonga le-blockchain elivela kwi-Parity Technologies. I-codebase ye-Kusama iphantse yafana naleyo ye-Polkadot-i-blockchain esebenzayo esebenzayo.
Iinkampani ezikhawulezayo zinokuthatha ithuba lothungelwano lwe-Kusama, enokunyuka kakhulu, esebenzisanayo, kwaye ibandakanya izinto ezingekaxhasi iPolkadot. Ngenxa yoko, uKusama uzichaza "njengenethiwekhi yecanary."
Abaphuhlisi banokusebenzisa iqonga ukuvavanya i-blockchain innovations ngaphambi kokuba baqalise iprojekthi yabo yokugqibela kwi-Polkadot - nangona iiprojekthi ezininzi zikhetha ukuhlala ne-Kusama kwimveliso yazo yokugqibela.
Ihlala isetyenziselwa ukuqalwa kwenqanaba lokuqala kunye nokulinga ngenxa yesithintelo esisezantsi sokungena kwi-parachain deployment kunye neemfuno zayo eziphantsi zebhondi zokuqinisekisa.
Abaseki baseKusama: Ngoobani?
Inkampani ebizwa ngokuba yiParity Technologies yakha iKusama kunye neqela elifanayo elenze iPolkadot. UGavin Wood yisazi sekhompyuter esaziwayo kwihlabathi kunye nomdwelisi wenkqubo owaseka i-Ethereum.
Abasebenzi abangaphezu kwe-100 basebenzela i-Parity Technologies, kuquka ezinye zeenjineli ze-blockchain ezigqwesileyo zehlabathi.
I-Kusama ikwaxhaswa zizibonelelo ezivela kwiWeb3 Foundation, umbutho ongenzi nzuzo owasekwa ukuze ukhuthaze isoftware yewebhu enikezelweyo kunye nokuxhasa itekhnoloji kunye nokusetyenziswa. Esi siseko sikwaxhasa uphando lukaKusama kunye nophuhliso loluntu ngeqela lakhe elikhulayo.
Kusama: Yintoni Eyenza Yahluke?
I-Kusama ayifani namanye amaqonga e-blockchain kuba yenzelwe ngokukodwa abaphuhlisi abafuna ukusungula iiprojekthi ezinesibindi, ezinomdla kunye neshedyuli yophuhliso oluhamba ngokukhawuleza.
Ngokusekwe kwi-multichain, idizayini ene-heterogeneously sharded, ixhomekeke kwindlela ekhethiweyo yobungqina bobungqina be-stake, njengenye indlela yobungqina bokusebenza ngamandla (i-POW) esetyenziswa ngamanye ama-blockchains amaninzi.
Inethiwekhi ye-Kusama inokuphucula ngokukhawuleza ikhonkco ngaphandle kwe-forking, kunye nenkxaso yokudlula umyalezo we-cross-chain (XCMP) ukunxibelelana namanye amatyathanga.
I-Kusama inikezela ngezakhono zolawulo lwe-on-chain ezifana ne-Polkadot. Zombini ziphantsi kolawulo kwaye azinamvume, zivumela nabani na ophethe iithokheni ze-Kusama (KSM) okanye iithokheni zeparachain ukuba avotele kwizindululo zolawulo, ezinje ngophuculo lweprotocol, izicelo zeempawu, kunye nokuphuculwa kokubeka. Ngexesha lokuvota elidityanisiweyo kunye nexesha lowiso lweentsuku nje ze-15, uKusama unikezela ngolawulo lwekhonkco oluphindwe kane ngokukhawuleza kunePolkadot.
Iprojekthi yenzelwe ukuba iiprojekthi zikwazi ukuqalisa ngokukhawuleza, ziqalise ukuhlaziywa kunye nokuphucula ngaphandle kokuphumeza ifoloko - ngaloo ndlela ikhuthaza ubumbano loluntu.
Ikhuselwe njani iNethiwekhi yeKusama?
Ubungqina obutyunjiweyo be-Stake (NPoS) yindlela yokuvumelana esetyenziswa nguKusama.
Unyulo lweendawo zabachaphazelekayo be-KSM lwenziwa ngothungelwano lwabatyumbi (abachaphazelekayo be-KSM). Ukuba abatyunjwa babo bakhethwe kumjikelezo olandelayo, baya kufumana iqhezu lomvuzo wokunyuka kwamaxabiso. Ukuba i-validator iphula iimfuno zokusebenza okanye yenza ngokungathembeki, isigxina sabo sinokuncitshiswa.
Ukongeza, uKusama usombulula iintengiselwano ezinqamlezayo usebenzisa indlela elula yokufola esekwe kwimithi yeMerkle. Ii-Validators kwi-relay chain chain zidlulisela imiyalezo ukusuka kwelinye ikhonkco ukuya kwelinye ngokusebenzisa iziqinisekiso ezifanayo kwikhonkco ngalinye - le nkqubo ekhuselekileyo, ethembekileyo isebenzisa iziqinisekiso ezifanayo kwikhonkco ngalinye.
Ungayithenga phi iKusama (KSM)?